Chelsea oo ganaax lacageed saartay Diego Costa
Ahmed Ali Sheikh
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa ganaax lacageed oo ah mushaharka laba toddobaad saartay cayaaryahan Diego Costa, kadib markii uu ku guuldarreystay inuu tababarka kooxda kasoo qeyb galo.
Xiddigan iyo kooxda ayaa waxaa ka dhex oogan muran ku saabsan mustaqbalkiisa cayaareed, xilli kooxda ay dooneyso inay iska iibiso, isagana uu ku adkeysanayo inuu doonayo kaliya in laga iibiyo kooxdiisii hore ee Atletico Madrid.
Costa oo ku sugan gurigiisa ku yaalla magaalada Lagarto ee dalka Brazil ayaa waryesi uu siiyey wargeyska Daily Mail ku sheegay in Chelsea ay ula dhaqmeyso inuu yahay dambiile oo kale, uuna wax xushmad ah u hayn macallin Antonio Conte.
Chelsea ayaa afar shuruud hordhigtay Costa, si loo xaliyo khilaafka labada dhinac, waxaa ay yihiin, inuu kusoo laabto England, inuu kasoo qeyb galo tababarka, inuu fayo-qab ahaan isku diyaariyo inuu kulamo safto, iyo inuu uu diyaar u noqdo in loo xusho kulamada kooxda.
Sida la rumeysan yahay ma jiro wax rajo ah oo laga qabo inuu Costa dib uga hoos cayaaro macalin Conte, oo dhowr bilood ka hor fariin qoraal mobile ugu sheegay “inuusan ka mid ah qorshaha kooxda ee xilli cayaareedkan”. Si kastaba Chelsea ayaa dooneysa in 28 jirkan uu ixtiraamo heshiiska uu kooxda kula jiro.